Jawaabtii qoraalkii Abdulwaaxid ee (C/LAAHI YUUSUF Vs MUUSE SUUDI)
WQ. Faarax Maxamuud (jabane)
Waxaan mudadii ugu danbaysay ku arkayay Internetka gaar ahaan bayjajka soomaliada qoraalo iyo fikrado ay soo qoraan dadka soomlida ee ku nool dibada iyo dal gudihiisa .
Waxa aan ka mid ahay dadka badan ee soomaaaliyeed ee booqda bajajkaas iska markaan akhriya afkaarta kala duwan ee dadku soo bandhigaan. Waana wax runtii wanaagsan in uu dadku soo bandhigo aaraahdooda.
Waxaa dadkaa ka mid ah Abduwaaxid Khaliif oo ah nin aan ka wada nimid gobalka Mudug. Laakiin aan u malaynayo inuu deegaan ahaan marka yiraahdo iga xaga itoobiya.
Abdulwaaxid waxaa qoraaladiisa uu aad u daba galaa waxa na ka qoraa C/Laahi Yuusuf madaxwaynaha dawlad Gobaleedka Puntland. Cabullahi iyo Abdulwaaxid iyagaa ayaa dhalasho isagakay sookeeya. Oo kula garnaqi mayo laakiin labadaba waxaan ka wada nimid gobalka Mudud ee dawlad gobaleedka Puntland. qoraalkan u nquri maayo inaan ku difaaca C/laahi
Laakiin hadii ay arintu soo gasho qadiyada shacabka Punland waxaan u malaynayaa inaan xaq tahay inaan jawaab ka bixiyo maqaalka Cabduwaaxid. Mana aaminsani la dulmiyo sida qabiil la isku dulminayo oo kale.
Maqaalkii ugu danbeeyay ee uu Aduwaaxid qoray. Oo ahaa( MUUSE SUUDI Vs CABDULLAHI YUUSUF) Waxaan soo xasuutay markaan akhriyay maqaalka, arin hada ka hor isoo martay. Oo hayd waxaan jooganay magaalo la mid ah wadadaan yurub. Waxaan meel isugu nimid ilaa tobaneeyo dhalinyaro ah oo ka soo wada jeeda dhinacaas iyo Puntland.(caduwaaxid waxaan filayaa inuusan ka cararin gobalka uu ka soo jeedo waayo dadka ku leh magaca diinta islaamla waxaa badanaa loogu yeeri jiray Qaryada ay kasoo jeedaan sida.Alla u naxriistee Shiikhul Albaani, Bukhaari iyo culuma kale oo badan. Puntlandna waa dhul ilaahay cid ay danbi ay ka gashay malahan)
Aragtidii Dadweynaha ee hadalkii Muuse Suudi ee December 2002.... GUJI
Qoraalkii Dhallinyaradii iska Fogeysey hadlkii Muuse..
Madaxweynaha Somaaliya, maxey adiga kula tahey?
Waxaa dhacday in nin ka mid dhalinyaradii aan meesha isugu timid uu gartay in uu noo soo bandhigo arin khayri ah oo la rabay in loogu tabaruco magaalo mid gaobalka Nugaal. Ninkii markuu hadalkii dhexmarinayo ayaa waxaa hadaklii ka dafay nin kale oo ka midahaa ragii dhagaaysanayay. Waxaa uu la soo booday hadal aan layaabay. Waxa uu yiri MEESHA INGA KALA WADA YAANAAN LAYSU KAAYO ARKINE. Runtii aniga iyo dhamaan dhalinyaradii kalbe waan la yaabnay. Waxa uu ka waday oon u fahmay inteenaan oo isku gobal ka wada nimid yaysan na arkin somaalida kale anagoo meel wada fadhina.
Mala waxaa kabad badtay ninkaas iyo C/waaxidba sheeko ay soomalidu isticmaalaan oo ah in markay qofka soomaliga arko qofka yimid gobaladaas inay u malaynayaan uu siyaasi yahay ama munaafad ka shaqaynayo. Umalayn mayo in ay somalida wax badan dheer yihiin waloow xataa sanadihii ugu danbeeyay xaga siyaasada looga roonaaday.
Hadii aan usoo noqdo isbarbargii Abulwaaxid MUUSE IYO CABDULAAHI. C/waaxid markiiuu bilaabay inuu ka sheekeeyo Muuse Suudi. Waxa uu aad ugu amaanay ka hor imaadkii uu ka hor dawlada Itoobiya. Wax ay umada soomaliyeed wada ogsoon tahay gacan saarkii uu la lahaa dawlada Itoobiya. Muuse waxa uu ahaa hogaamiyaha saanada hubeed ee ugu badan ka heli jiray wadanka Itoobiya.
Muuse waa hogaaamiye kooxeed aysan nafta qofka biniaadamka ah waxba ugu fadhiyin.Waa ninkii inta dad badan meelishiyayduusu kusoo layeen bartamaha magaalada Muqdhisho. Markii loo tagay oo la waydiiyay sababta ay malayshiyadiisu dadka u laayeen waxa uu ku jawaabay "ar hala laayo iska daa asaleey dhimahaayeeyne" taasi waxa ay ku tusaysaa meesha uu Muuse ka taagan yahay nafta qofla bini,aadamka ah. Ilaahay xagiisa nafta qofka bini,aadamka ah waxa ay ka tahay wax wayn.
Markale oo la waydiiyay Muuse sababta uu dadka u laayo iyagoon waxba galabsan waxa uu ku jawaabay Hogaamiye Kooxeed MUUSE"waxaan dadka u laayaa in la ii aqoonsado inaan ahay hogaamiye Koxeed ka jira Xamar"
Muuse markii uu ka carooday shirka keenya waxa uu sii maray magaalada Kismaayo oo ah magaalo aad looga barakiciyay dad aysan Cabdulwaaxid aad ukala fogayn. Waxa uuna la samaytay isbahaysiga uu Cadulwaaxid ku amaanayo. Isbahaysiga waxaa ku jira Col. Jees oo la xasuusan yahay xasuuqii uu ka gaystay Kismaayo sagaashameeyadii. Waxaan aad ula yaabay markaan maqlay Jees oo Itoobiya waxa ka sheegaya oo leh "Itoobiya waxay rabtaa inay Somaaliya kala googayso" Jees miyuusan ahayn ninkii saxiixay hishiiskii Dirardhabe isaga, Tuur iyo Caydiid oo ahaa in Soomaliya loo kala jaro sadex qaybood marka Siyaad Bare xukunka laga tuuro.
Waxaan u malaynayaa sabaha loo sameyeeyay Isbahaysigaan inaysan ahayn wax aad u agad fahamkiisu. Waxaana isugu tegay niman badan oo ka carooday shirka Kenya isla markaana isku deyaya inay geed dheer iyo geed gaaban u fuulaan inaysan Somaaliya yeelan Dawalad Dhexe oo shaqaysa. Waxaa ku jira Farax Sandiko oo markii uu Nairobi la isugu yimid la waydiiyay meesha uu ka socdo. Ka dib waxa uu ku noqday Xamar waxa uuna bilaabay hub iibsi iyo Jabhadayn si loogu aqoonsado hogaamiye kooxeed.
Waxaa isbahaysigaan ku jira oo kele Cisamaan Caato aad loogu eedeeyo inuu ka ganacsado daroogada, runtii nin mudan ma,ahan in hal ilbirqsi oo qof waqtigiis ah lagu lumiyo. Waayo ilaa hada lama yaqaan waxa uu doonayo. Waa nin hadba darbi isku rara kuna jiro nacayb aad u fog oo u qabo qaar ka mid bulshada Soomaliyeed.
Abdulwaaxid waxa kale oo uu ku qoray qoraalkiisa in Muuse iska bari yeelay dawlado shesheeye. Waxaan la yaabanahay goormaa MUCAMAR ALL QADAAFI qaatay baasboorka soomaliga ah. Muuse iyo C/qaasim waxa muda bil ah dul fadhiyeen Qadaafi si dhaqaale uga helaan si ay u meel mariyaan hindisahooda ah in aan koonfurta Soomaliaya dagin sanadaha soo socda.
Muuse iyo C/qaasim waa laba hogaamiye kooxeed oo ka soo jeeda Magaalada muqdisho. Marka waxaan la yaabanaha waxa C/waaxid tusi waayay waxyaabaha argagaxa leh ee ka dhaca magaaladaas. Oo mar ahaan jirtay magaalada ugu bilicda san geeska Africa.
Hadii ay awoodi waayeen inay wax ka qabtaan maxaa u diiday inay ka shaqeeyaan in la helo dawlad dhexe oo waxa ka qabata koonfurta Soomaliya. Wax ka qarsoon ma ahan barakicinta ay C/qaasim iyo jifadiisu ka wadaan koonfurta Soomaliaya oo aan u malaynayo in Caduwaaxid si fiican uga deragsanyahay. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko maqaalo uu C/waaxid wax kaga qorayo waxayaabaha ka dhacaya Koonfurta Somalaya.
Hadii aan u soo gugbo C/laaahi Yuusuf oo isagu ka taliya gobalada Puntland isla markaana xoog ku qabsaday markii ay u dhamaatay mudadii sadexda sano ahayd ee ugu horaysay ee loo doortay. Maqaalkaygaan u qorayo maayo inaan ku difaaco C/yuusuf . Waxa aan waliba C/waaxid ku raacsanahay in uu dagaal aan loo baah nayn uu ka dhacay gobaladaa labadii sano ee ugu danbaysay. Waxayse ila tahay inaan la iloobin in ay Soomalidu ay qabiil qabiil ay isu layn jiratay waligeed. Laakiin waxaa mar walbaba la gaari jiray xal si kasta oo qabaa,iladu ay isu laayaane. Waayo soomalidu waxay tiraahdaa dagaal waxaa ku dhinta wiil ee wiil kuma dhasho.Waana mida ka dhacaday Puntland oo kooxdii C/laahi iyo qolyihii ka soo hor jeeday ay hishiis gaareen. C/lahina waxaa waxa uu qirtay isla markaana garwaaqsaday in uu qaladaadka dhacay uu inta badan lahaa isagu.
Waxaa kale oo iyana cad in dad badan oo oqoonyahayno iyo wax garad ay isaga tageen gobaladaas inta ay isku dhici lahayeen C/laahi. Waayo waxa ay garwaaqsadeen in amaanka iyo xasiloonida ay ka fiican tahay xukun ay iyagu helaan. Taas waxaa iyana sameeyay oo kale reer Somaliland oo markii uu Cigaal xukunka qabsaday waxaa iska huleelay rag in muda ah soo dagaalamay oo ka mid ahaayeen saraakiishii sarsare ee SNMta.
Waxa aan hadaba C/waaxid kula talin lahaa
1) Inuu kala garto C/laahi yuusuf iyo qadiya umad dhan oo degan gobala badan oo ka mid ah Somaliya.
2)In iska daayo aayadaha iyo axaadiista uu soo daliilsanao hadii uusan si daacadnimo ah wax u qorayn.
3) In qab qable oo dhan isku mid yahay laakiin waxaa fiican in mid walbaba lagu sheego falalka uu ku kacay, waayo wax ku filan ma,ahan inaad tiraahdid qabable B iyo qabqab T waa isku mid.
4) waxaan kale oon iyana meesha ku jirta in C/waaxid garto in Itoobiya ay taageertay isla markaana ay hubaysay dhamaan jabhadihii la galaalamayay dawladii Somaliyeed.
Oo qabqablihii wax ka sheegayaa Itoobiya uu meel kale ka haysto taageero. Waayo magaranyo waxa ay ku kala duwan yihiin lacagta ay bixinayso Libiya ka dibna hubka lagu soo iibsanayso iyo hubka itoobiya bixiso. Iyadoo ay hadana jiraan wadama kale oo baxsha hubka sida Elitireeya iyo Jabuuti isla markaana taageero buuxda siiya qabqablayasha qaarkood.
5)waxaan kale oo iyana meesha ka marnayn in Itoobiya ay ka faa,idaysanyso fursadaan ah in la waayay qaranimadii Somaaliyeed, oo waxaad ogaataa hadii kan soomaligaa uusan barakicin mid kale oo soomaaliya in aysan jirteen nin u gali lahaa Itoobiya.
WQ. Faarax Maxamuud (jabane) faaraxjabane@hotmail.com
Faafin: SomaliTalk.com | Dec 16, 2003